စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် ထောင်ထွက်လူနာတစ်ဦး တာဝန်ပေါ့လျော့မှူကြောင့် မသေသင့်ဘဲသေဆုံးခဲ့ရ ( Rakhine News Group ) ~ Latha Mobile 0945 000 1727
စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် ထောင်ထွက်လူနာတစ်ဦး တာဝန်ပေါ့လျော့မှူကြောင့် မသေသင့်ဘဲသေဆုံးခဲ့ရ ( Rakhine News Group )
4:13 AM ko pae Lay No comments
Ko Sein Than
သံတွဲအကျဉ်းထောင်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်သာခွင့်ဖြင့် စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက်က လွတ်မြောက်လာသော ထောင်ထွက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ခင်မောင်မြင့်(ခ)ဘဲပေါက် (၃၅)နှစ်သည် (၄.၁.၂၀၁၄)ရက်နေ. ညနေ ၇နာရီခန်.တွင် စစ်တွေဆေးရုံသို. တက်ေ၇ာက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ရာ လူနာရှင်မပါသဖြင့် ဆေးရုံမှ လက်မခံဘဲပြန်လွှတ်လိုက်သည်ဟုသိရသည်။
ထိုထောင်ထွက်လူနာသည် ဆေးရုံရှေ့မြောင်းထဲတွင် အားအင်ပြတ်လပ်ပြီး ယဲ့ယဲ့ကျန်ချိန်တွင် မြင်တွေ.သူတစ်ဦးက ကြက်ခြေနီအဖွဲ.အားသတင်းပို.ရာ တာဝန်မယူနိူင်ဟုပြောကြောင်းသိရသည်။တာဝန်ကျ ရဲအဖွဲ.အားသွားရောက်သတင်းပို.ရာ ထောင်ကလွတ်လာသူ ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို.နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်သည်ဟုသိရှိရသည်။
ထို.နောက် စစ်တွေမြို.ပေါ်မှ လူမှူရေးအဖွဲ.များနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးဆေးရုံတင်ခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်။သို.သော်လည်း ဆေးရုံတွင်ဆေးကုသခံနေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကျ သူနာပြုဆရာမ ၂ဦး၏ ပေါ့လျော့မှူကြောင့် ထိုလူနာသည် အသက်မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်။
။ယောကျား ဖျားနာဆောင်တွင် အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြင့် အသက်ရှူနေစဉ်အတွင်း လူနာမှ မွမ်းသည်ဟုဆိုသဖြင့် ထိုသူနာပြုဆရာမများအားသွားခေါ်ရာ လာမကြည့်နိူင်သေးဘူးဟုပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ထိုလူနာမှာ အောင်ဆီဂျင် ပိုက် တန်းလန်းဖြင့် အသက်သေဆုံးသွားသည်ဟုသိရသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင်...
မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း မေ...
ကမ္ဘာ့ အလှဆုံး ၆ ဦးစာရင်းဝင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ေ...
ဖုန်းဆိုင်များ မကြာခဏ ဖောက်ထွင်းခံနေရပြီး ကျူးလွန်...
စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် ထောင်ထွက်လူနာတစ်ဦး တာဝန်ပေါ့...
ရုပ်ချောတာကို မနာလိုလို့ ဗစ်တိုးရီးယား စီးကရက် မော...
ဒဂုံမြောက်ပိုင်းရှိ ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာစီမ...
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ် ပြုလု...